Ny hoavin'ny UNWTO novolavolain'i Arabia Saodita sy Espaina: Andro vaovao ho an'ny fizahantany iraisam-pirenena natomboka tao amin'ny FII
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ny hoavin'ny UNWTO novolavolain'i Arabia Saodita sy Espaina: Andro vaovao ho an'ny fizahantany iraisam-pirenena natomboka tao amin'ny FII
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao Mafana Espaniola • malaza ankehitriny • WTN
Mila fotoana sy ezaka mirindra ny fanarenana ny fizahantany. Mitaky fiaraha-miasa iraisam-pirenena sy manome hery ny fikambanana multilateral izany. Androany dia tonga teo amin'ny latabatra i Arabia Saodita sy Espaina niaraka tamin'ny fifanarahana izay mety hamolavola ny ho avin'ny fizahantany sy ny UNWTO.
Arabia Saodita sy Espaina dia miara-miasa amin'ny famolavolana ny fizahantany post-COVID ao anatin'izany ny UNWTO.
HE Ahmed Al Khateeb - Minisitry ny Fizahantany, Fanjakan'i Arabia Saodita.
HE Maria Reyes Maroto - Minisitry ny Indostria, Varotra ary Fizahantany, Fanjakan'i Espaina.
The Future Investment Initiative (FII) tany Arabia Saodita no natao androany niaraka tamin'ireo mpitarika ara-bola 6,000 nanatrika.
FII Institute dia fototra tsy mitady tombom-barotra manerantany miaraka amin'ny sandry fampiasam-bola sy fandaharam-potoana iray: Impact on Humanity. Manolo-tena amin'ny foto-kevitry ny ESG, mamelona ny saina mamiratra sy manova hevitra ho vahaolana tena izy amin'ny sehatra 5 ifantohan'ny AI sy Robotika, Fanabeazana, Fahasalamana ary Faharetana.
Sambany no nifantohan'ny fitsangatsanganana sy ny fizahantany ary nandray anjara lehibe tamin'ity fihaonambe maneran-tany nampiantrano an'i Arabia Saodita ity. Mpitarika ambony 150 eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy fizahantany no tonga nanatrika, anisan'izany ny minisitra 10 nipetraka.
Very tamin'ny fahatokisana sy ny maha-zava-dehibe ny UNWTO nanomboka ny taona 2018. Raha ninia nampiantrano ny lanonana manokana tao Barcelone ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvil tamin'io andro io ihany ary niaraka tamin'ny fandraisan'anjara malemy, dia niara-nivory ireo mpitarika ao Arabia Saodita mba hamolavola ny hoavin'ny UNWTO.
Nisy fifanarahana momba ny Arabia Saodita sy Espaina manambatra hery hamolavola ny fizahantany post-COVID ao anatin'izany ny UNWTO.
Io fifanarahana io dia nosoniavin'ny HE Ahmed Al Khateeb an'i Arabia Saodita ary HE Maria Reyes Maroto an'i Espaina. UNWTO dia manana ny foibeny ao Madrid. Ity fifanarahana ity dia mamarana ihany koa ny tsaho momba an'i Arabia Saodita te hamindra ny foiben'ny UNWTO ho any Riyadh. Arabia Saodita izao dia ekipa iray vonona hitarika amin'ny famolavolana ny hoavin'ny fizahan-tany manerantany sy ny fikambanana ao ambadik'izany - UNWTO.
Fanambarana iraisan'i Arabia Saodita sy Espaina
1. Nanao fivoriana tena tsara izahay androany teo amin'ny sisin'ny Future Investment Intiative any Riyadh, izay nahitanay sehatra maromaro ahafahan'i Espaina sy Arabia Saodita mitana anjara toerana lehibe amin'ny famelomana indray ny sehatry ny fizahantany taorian'ny areti-mifindra, ho an'ny ho lasa iray amin'ireo andrin'ny fanarenana ara-toekarena maneran-tany izany. Mila fitarihana sy fandrindrana matanjaka ny sehatry ny fizahantany mba hampivondronana ny governemanta sy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny sehatra tsy miankina hiara-miasa bebe kokoa. Mila manangana sehatra fizahan-tany matanjaka kokoa, maharitra ary mitambatra izay manome fanambinana mandritra ny fotoana maharitra.
2. Arabia Saodita dia manana ary mbola mitana anjara toerana lehibe amin'ny fandrindrana iraisam-pirenena ho an'ny sehatra, manomboka amin'ny fiadidiany ny G20 amin'ny taona 2020. Ny Fanjakana dia nanorina izany tamin'ny hetsika lehibe maromaro, anisan'izany ny fanomezana 100 tapitrisa dolara ho an'izao tontolo izao. Bank for the Tourism Community Initiative, the Best Villages program, miaraka amin'ny UNWTO, ary ankehitriny ny Sustainable Tourism Global Center. Niara-niasa tamin'ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena i Arabia Saodita mba hananganana programa mikendry ny hamolavola ny hoavin'ny fizahantany sy hamahana ireo fanamby fototra atrehin'ny indostria.
3. Nandritra ny krizy COVID, Espaina no lohalaharana amin'ny ezaka iraisam-pirenena hamerenana amin'ny laoniny ny fivezivezena satria efa nandray ny mari-pankasitrahana COVID Digital EU. I Espaina no firenena faharoa be mpitsidika indrindra eran-tany, nahazo mpitsidika iraisam-pirenena 83.7 tapitrisa tamin'ny taona 2019. Malaza amin'ny toerana halehany sy ny fotodrafitrasa ary ny orinasam-pizahantany manerantany. Espaina dia mpitarika manerantany amin'ny fizahan-tany, mpikambana mpanorina ny UNWTO, ary izao dia mampiasa vola amin'ny complex vaovao izay hisy ny foiben'ny fikambanana.
4. Samy manaiky ny hanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ireo olana telo lehibe hampandrosoana ny fizahantany ny firenena roa tonta: voalohany, ny fampiroboroboana ny faharetana, izay tena ilaina mba hiantohana ny fahavelomany amin’ny hoavy amin’ny maha-sehatra fitomboana azy sy ny fandraisany anjara amin’ny toekarena maneran-tany tsy misy karbona, ary ny fanamafisana ny firaisankina ara-tsosialy eo anivon’ny mpampiantrano. fiaraha-monina. Faharoa, fiaraha-miasa amin'ny fanovana nomerika, fananganana toerana manan-tsaina sy mifandray, fanatsarana ny fikorianan'ny rivotra sy ny fifanakalozam-baovao ary ny fahitana mba hanafaingana ny fiovan'ny sehatry ny fizahantany. Fahatelo, hiara-hiasa i Espaina sy Arabia Saodita amin'ny fampiroboroboana sy fampivelarana ny fanofanana ny maha-olona mba hanamafisana ny fahaizan'ny olona miasa amin'ity sehatra ity, manomboka amin'ny fiofanana arak'asa ka hatramin'ny fianarana diplaoma sy ny fanasokajiana.
5. Ny fizahantany dia sehatra manan-danja maneran-tany. Ary ny fifanarahana anio dia hiantoka ny fiaraha-miasa akaiky kokoa amin’ny roa amin’ireo mpitarika ny sehatra ho tombontsoan’ny rehetra izay miankina amin’izany.